Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada baladweyn ee G/Hiiraan. – Hornafrik Media Network
Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada baladweyn ee G/Hiiraan.
Hornafrik-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan, halkaasoo ay ka jirto xaalad bani’aadanimo oo ka dhalatay daadadka ka dhashay roobabka iyo fatahaada wabiga Shabeelle.
Wararka ayaa sheegaya in ammaanka garoonka diyaaradaha Beledweyne iyo hareerihiisa si aad ah loo adkeeyay, waxaana goor sii horeysay gaaray ciidamo Koofiyo Gadiid oo ah kuwo qaabilsan ammaanka Madaxweynaha.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Mas’uuliyiin ka tirsan maamulkiisa ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu diyaarad Helicopter ku tagi doono magaalada Beledweyn, iyadoo garoonka Ugaas Khaliif uu ka mid ahaa goobaha ay saameeyeen roobabka oo biyo badan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kormeeri doono deegaanada fatahaada ka dhacday iyo dadkii bakaracay ee ku sugan daafaha magaalada Beledweyn.
Booqashada Madaxweynaha ku tagayo Beledweyn ayaa timid qeylo dhaan weyn oo Maamulka Hirshabeelle ka soo saaray musiibada ka dhalatay fatahaada wabiga shabeelle oo ay ku barakaceen illaa 150 kun oo ruux.
Dowladda Federaalka ayaa wada dadaalo loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen fatahaada, kuwaasoo banaanka magaalada u barakacay, kaddib markii magaalada Beledweyn ay biyo badan gudaha u soo galeen, isla markaana go’doon noqotay.
Deg-Deg- Codeynta doorashada Gudoomiyaha G/Shacabka oo bilaabatay iyo musharax is casilay.
Deg-deg Afar musharax oo u gudbay wareega labaad ee doorashada.